chirungu alphabet, mavara echirungu
Muchidzidzo ichi chinonzi mavara echiRungu uye mavara echiChirungu, tichadzidza mavara echiChirungu, iwo mavara ari muchiChirungu alfabhethi, kududzwa uye kunyorwa kwetsamba dzeChirungu. Mune yedu yeChirungu alfabheti hurukuro, isu zvakare tichasanganisa yemuenzaniso mitsara nezve echirungu mavara.
Mavara echiChirungu anoshandisa mavara ari muchiLatin alphabet seTurkey. Muchikamu chino Chirungu mavara Unogona kudzidza chidzidzo. Kuperetera tsamba dzeChirungu uye Chirungu alphabet madudziro Unogona kuona hurukuro.
Akawanda Tsamba Dziripo MuChirungu Alphabet?
English alphabet; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Iwo akazara mavara makumi maviri nematanhatu, kusanganisira Z. 26 etsamba idzi makonzonendi uye mashanu mavhawero. Mavhawero akakosha mururimi rweChirungu, asi iwo anonetsa kudzidza nekuti anogona kuita ese marefu uye mapfupi ruzha. Kusiyana neTurkey mavara q, w, x Ipapo.
Iwo mavara ç, ğ, ö, ş, ü muTurkey haawanikwe muChirungu. Ndiwo mutauro usingaverenge sezvakanyorwa muChirungu. Uye zvakare, chiperengo chemavara madiki semavara makuru chakasiyana zvakare.
Zvino ngatitangei kupa mavara echiRungu nemifananidzo. Ipapo tinonyora tsamba dzese uye totsanangura madudziro etsamba imwe neimwe, pamwe chete nemuenzaniso mazwi.
Chirungu Alphabet - Nemifananidzo
Chirungu Alphabet, Chirungu Tsamba uye Kududzira
Mutsamba iripazasi, unogona kuwana chiperengo chemazwi anoumba arufabheti yeChirungu semavara madiki uye mavara makuru, pamwe nemadudzirwo awo. Kuziva arufabheti kwakakosha kuti uvandudze hunyanzvi hwako hwekuverenga uye kuva nechivimbo chakanyanya muhunyanzvi hwako hweChirungu. Mune urwu runyorwa, unogona kuwana tsamba yega yega nemadudziro ayo mumavara makuru neepasi.
h - H - kuzarura
i - ini - mwedzi
l - L - ruoko
w - W - yakapararira
Kunyanya kana uchidzidzisa mavara echiRungu kureschool uye epuraimari vadzidzi vepuraimari arufabheti rwiyo ya da Tsamba dzeChirungu vhidhiyo iwe unogona kutsigira ne.
Iwe unogona kudzidza zviri nyore chidzidzo ichi nekutaura mataurirwo ezvakatemerwa zvirevo zvinonzwika uye nekuteerera mataurirwo etsamba imwe neimwe. Panguva imwecheteyo, iwe paunotarisa yekunze TV nhevedzano kana mabhaisikopo neChirungu zvinyorwa zvidiki uye echirungu manzwi, iwe unogona kuona zviri nyore zvese zviperengo uye kududzwa kwechirevo.
Maitiro Ekuverenga Tsamba dzeChirungu
Ungaverenga Sei Tsamba A muChirungu?
Zera (eyc): zera
Mhuka (enimil): mhuka
Nzira yekuverenga sei Tsamba B muChirungu?
Shiri (börd): shiri
Ungaverenga Sei Tsamba C muChirungu?
Iko hakuna capital O uye zvidiki zvitatu mavara muChirungu. Kududzwa kwetsamba C kunosiyana zvichienderana neshoko rairi. Pfungwa yekucherechedza ndeyekuti kana mavara c uye h ari padivi nepadivi, tsamba yacho inowanzo rira katatu. Inogona zvakare kurira "ch" "k" zvinoenderana nekwakatangira mutauro kweshoko.
Uya (cam): uya
Guta (siti): guta
Nzira yekuverenga sei Tsamba D muChirungu?
Imbwa (imbwa): imbwa
Ungaverenga Sei Tsamba E muChirungu?
Tsamba E zvakare ine mataurirwo akasiyana zvichienderana nekwakabva izwi iri.
Zai (semuenzaniso): zai
Ziso (mwedzi): ziso
Ungaverenga Sei Tsamba F muChirungu?
Mhuri (yevakadzi): mhuri
Nzira yekuverenga sei Tsamba G muChirungu?
Iko hakuna "ğ" muChirungu alfabhethi.
Mutambo (ngochani): mutambo
Musikana (ona): musikana
Ungaverenga Sei Tsamba H muChirungu?
Anofara (hepi): anofara
Heti (het): ngowani
Maitiro Ekuverenga iyo Chirungu Tsamba I?
Ndine ini muchirungu here Mutsamba ini izwi rinonakidza / rinonakidza, tinoona shanduko muchimiro chetsamba iyi. Iko hakuna capital ini uye mavara madiki I mavara muChirungu.
Ini (mwedzi): Ini
Ice (ays): chando
Ungaverenga Sei Tsamba J muChirungu?
Joinha (mari): joina
Svetuka (musasa): svetuka
Ungaverenga Sei Tsamba K muChirungu?
Tsamba K inosiyana zvichienderana neshoko rairi.
Mambo (mambo): mambo
Ziva (nov): kuziva
Tarira: Tsamba k haiverengwe kana mabhii Kn ari padivi nepadivi.
Ungaverenga Sei Tsamba L muChirungu?
Mutauro (lenguic): mutauro
Nzira yekuverenga sei Tsamba M muChirungu?
Mari (mania): mari
Amai (madir): amai
Nzira yekuverenga sei Tsamba N muChirungu?
Zita (neym): zita
Nyowani (niüv): nyowani
Mapfumbamwe (nayn): mapfumbamwe
Ungaverenga Sei Tsamba O muChirungu?
Iko hakuna mavara ekumusoro neepazasi muzvinyorwa zveChirungu.
Vhura (maonero): vhura
Imwe (van): imwe
Ungaverenga Sei Tsamba P muChirungu?
Mufananidzo (picchır): mufananidzo
Tamba (pley): tamba, tamba
Ungaverenga Sei Tsamba Q muChirungu?
Kurumidza (kuik): kurumidza
Ungaverenga Sei Tsamba S muChirungu?
Hapana tsamba "ş" muChirungu. Kana mavara S uye h ari padivi nepadivi, rinopa ruzha "ş".
Gungwa (sii): gungwa
Nhau (sitarian): nyaya
Ungaverenga Sei Tsamba T muChirungu?
Kana mavara "th" ari padivi nepadivi, mataurirwo acho anoonekwa zvichienderana nekwakabva izwi iri.
Tafura (tepi): tafura
Funga (tink): kufunga
Izvi (dis): izvi
Ungaverenga Sei Tsamba U muChirungu?
Hapana tsamba "ü" muChirungu.
Use (yuuz): kushandisa
Zvakajairika (yujıl): zvakajairwa
Pasi (nguva): pasi
Ungaverenga Sei Tsamba V muChirungu?
Zvakanyanya (data): chaizvo
Shanyira (shanyira): shanyira
Inzwi (vois): izwi
Ungaverenga Sei Tsamba W muChirungu?
Hondo (vor): hondo
Kukunda (vin): kuhwina
Zvakashata (rong): zvisizvo
Ongorora: Kana mavara "wr" ari padivi nepadivi, W haiverengwe, kureva V inzwi harinzwikwe.
Ungaverenga Sei Tsamba X muChirungu?
Xerox (zirox): kopi
Ungaverenga Sei Tsamba Y muChirungu?
Hongu (hongu): hongu
Mudiki (yang): mudiki
Nzira yekuverenga sei Tsamba Z muChirungu?
Mazhinji emitauro yeChirungu yekudzidzira mavara echiRungu, Sei kunyora manhamba muChirunguIwe unofanirwa kutarisisa kune zvinhu zvakaita semazita. Iwe unogona kunatsiridza tsika yako nekuverenga sampuro zvirevo kana sampuro magwaro pane iyi nyaya. Kuona mavhidhiyo echirungu mavhidhiyo uye kuteerera kune echiRungu alfabhethi nziyo zvinokupa iwe yakawanda fambiro mberi mune izvi.
Shamwari dzinodiwa, urikuverenga iwo musoro wenyaya wechiChirungu. Kana iwe uchida kuona zvimwe zvedu zvese zveChirungu zvidzidzo, tinya apa: Zvidzidzo zveChirungu
Chirungu Alphabet Nhoroondo
Chirungu; Iine mazwi kubva mumitauro yakawanda, kusanganisira French, Greek, uye Latin. Iwe unogona kuona izvi mukupereta kwemazwi mazhinji echirungu. Inotevera mutemo weChirungu fonotiki; zvisinei, nekuda kwemazwi akawedzerwa aya, mitemo yacho yakaoma kudzidza nekushandisa.
Kusvikira 1835, Chirungu Alphabet yaisanganisira mavara makumi maviri neshanu: iyo 27th tsamba yearufabheti mushure chaipo pe "Z" yaive "uye" chiratidzo (&).
Nhasi, Chirungu Alphabet (kana Chazvino Chirungu Alphabet) ine mavara makumi maviri nematanhatu: 26 kubva kuOld English uye matatu akazowedzerwa.
Chirungu alphabet lyrics
VW uye XYZ
Ndinogona kuimba maABC angu,
Iwe haungaimba pamwe neni here?
Sei Kudzidzisa Tsamba dzeChirungu kune Elementary Chikoro Vadzidzi?
Ndichiri kudzidza Chirungu, vadzidzi vepuraimari vachatanga kutanga nemusoro wetsamba. Kufambira mberi mune iyi nyaya, iwe unogona kuita mutsauko zvinoenderana nezera; Tinokurudzira kudzidzisa mavara matatu pachidzidzo chevane makore mashanu kusvika mashanu ekuberekwa uye tsamba shanu pachidzidzo chevana vanopfuura makore manomwe. Unogona kutanga nemavara madiki uye woenderera mberi nekumavara makuru mushure mekunge vadzidzi vavadzidza zvakanaka.
Sezvaunodzidzisa tsamba yega, unogona kushandisa zviitwa kudzidzira nekusimbisa tsamba imwe neimwe. Muenzaniso chiitiko;
Vana vanofarira kunyora pabhodhi kana pabhodhi. Mushure mekudzidzisa tsamba yega yega, ipa mudzidzi choko / mucherechedzo uye mukumbire kuti anyore tsamba pabhodhi (yakakura sezvinobvira). Unogona kuve nevadzidzi vanopfuura mumwe chete izvi pamutsamba imwe neimwe.
Chimwe chiitiko chingave chekumubvunza kuti apatsanure zita rake muzvikamu. Ngatipe muenzaniso muenzaniso;
Mibvunzo inogona kubvunzwa nezve chiperengo,
- "Unoperetera sei zita rako?"
- "Unogona kuperetera zita rako, ndapota?"
- "Zita rangu ndinonzi Mete, METE"
Ngatibvunzei munhu zita rake uye kuti angaripereta sei. Uye wobva wasuma zita rako uye chiperengo kwaari. Heino muenzaniso:
-Zita rako ndiani?
Zita randu ndi …….
-Wakaperetera sei zita rako?
Ndizvo… .. -… .. -… .. -
Chirungu Alphabet Sample Mibvunzo
Nzira yekududza sei tsamba A muChirungu alfabhethi?
B. dublu uye
C. kaviri uye
Ndeipi yetsamba inotevera inowanikwa muTurkey asi kwete muChirungu?
Ndeipi yetsamba inotevera inowanikwa muChirungu asi kwete muchiTurkey?
Ndeipi pane inotevera tsamba inoverengwa seZED muChirungu alfabhethi?
Nzira yekududza sei tsamba J muchirungu mavara?
Ndeipi yetsamba inotevera isingawanikwe muarufabheti yeChirungu?
Ndeipi pane inotevera iri konsonendi?
How to pronounce the letter M in Chirungu?
Mavara mangani aripo muarufabheti yeChirungu?
Kududza sei mavara kana anotevera kune echirungu?
Nzira yekududza sei mavara oe padivi pechirungu?
Sei kududza izwi nyora?
Nzira yekududza sei izwi zano?
Kazhinji Chirungu Alphabet Chinyorwa Chekutaura Zvinogona kutaridzika kunge zviri nyore pakutanga kuona. Asi iwe unogona kunge wakacherekedza kuti tsamba imwe neimwe inogona kuva nemadudzirwo akasiyana siyana. Mamwe mavara haawanikwe muchiTurkey. Muchinyorwa chino, chinangwa chedu ndechekubvisa nyonganiso yako uye kuti kudzidza alfabheti yeChirungu kusanyanya kunetseka.
Maitiro Ekubata Nemusoro Tsamba Tsamba Nyore?
Muchitsauko chino Nomusoro nyore Chirungu tsamba Isu tinokupa mashoma ekunyengera iwe.
Izvo zvakakosha kuti uterere kune wekuzvarwa mutauri kuti udzidze mataurirwo etsamba imwe neimwe. Rangarira kuti zvichave zvakaoma kwazvo kunzwisisa vatauri veChirungu mukutaura pakutanga. Kana iwe uri mutsva kuChirungu, ungangoda kufunga kuteerera iyo yechirungu podcast yakagadzirirwa kudzidzisa Chirungu kune vanotanga.
Nyora yako yega alufabheti rwiyo: Edza kutsvaga yako nzira yekuimba mune alufabheti kana kuimba iwo mavara zvinoenderana nerwiyo rweyaunofarira pop rwiyo. Nokugadzira rwiyo rwako pachako, unogona kuita kuti rwiyo ruwedzere kunakidza.
Batanidza tsamba idzi nemamwe mazwi. Nzira iri nyore yekuita izvi ndeye kunyora makumi maviri neshanu nyaya mune iro izwi rimwe nerimwe rinotanga neimwe tsamba yearufabheti.
“Mushure mekudya kwekuseni, kitsi dzakaparadza zvese. Hove, mitambo, zvinhu zvemumba… ”
Shandisa zviyeuchidzo zvako paunenge uchienderera mberi nenyaya uye edza kushandisa ese 26 mavara mukutsinhana. Rangarira, hazvifanirwe kuita zvine musoro! Izvo zvakanyanya kusanzwisisika iyo nyaya ndeye, zvakanyanya mukana kuti iwe urangarire nezvayo, saka ive shuwa yekunakidzwa iwe uchidzidzira chiitiko ichi!
Paunenge uchidzidza mavara echiChirungu, haufanire kurasikirwa nekudzokorora uye kuteerera kududziro yemavara. Kudzidza izwi riri nyore kuyeuka padyo netsamba imwe neimwe kunogona zvakare kukubatsira kuyeuka mavara zviri nani. Kune izvi, iwe unogona zvakare kushandisa mazwi atakapa semienzaniso padyo netsamba imwe neimwe.
Iwo mavara muChirungu haana kutaurwa nenzira yatinonyora uye nemataurirwo muchiTurkey, manzwi aya akasiyana. Madudzirwo etsamba dzeChirungu anosiyana kubva pashoko neshoko. Chikonzero chikuru cheiyi mutsauko izwi mavambo. Naizvozvo, chiperengo nemadudzirwo etsamba dzese muChirungu zvakasiyana. Aya mavara anoburitsa makumi mana nemana mhando dzakasiyana dzeruzha. Ichokwadi chekuti kune mamwe marudzi eruzha kupfuura huwandu hwetsamba muarufabheti zvinoita kuti kudzidza mavara kuome. Kunyangwe zviri nyore kubata nemusoro iwo mabhii, kuburitswa kwetsamba iyo inonzwika neshoko ripi mushoko kunogona kukonzera nyonganiso.
Chekutanga pane zvese, iwe unogona kuyedza kuteerera kuChirungu alfabhethi nziyo kuti udzidze nekusimbisa yako echirungu alfabhethi ruzivo. Iwe unogona zvakare kubata nemusoro mazwi akapusa uye tsamba nekutarisa echirungu makatuni kuti udzidze zvimwe zvakapusa. Kuteerera kuChirungu madhimoni uye kutarisa makatuni kuchakubatsira iwe kudzidza mavara echiRungu nemufaro uye kunzwisisa mazwi akapusa zvakajeka. Kuti udzidze kududzwa kwemazwi echiRungu, unogona kutora chikamu muzviitiko zvaunogona kudzidzira kutaura kazhinji. Kudzidza arufabheti yeChirungu ndiyo nhanho yekutanga yekudzidza Chirungu.
Zviitire iwe chinangwa uye chirongwa chekudzidza chekudzidza Chirungu. Ndezvipi zvakaoma zvaunoda kuti ushande kuti uwane zvinangwa zvako? Mhinduro iyi yakasiyana kune wese munhu. Chinhu chakakosha kuona zvinhu sezvazviri. Kana iwe uchishanda maawa makumi matanhatu pasvondo, usaronge kudzidza Chirungu kwemaawa makumi mana pasvondo. Tanga kunonoka, asi dzidza nguva dzose.
Shandisa zvinhu zvinonetsa asi zvisina kunyanya kuoma. Tsvaga zvinoshanda kwauri. Mushure mekushanda kwemavhiki mashoma, chinja purogiramu yako yekudzidza zvinoenderana. Iwe unoshanda paakanakisa husiku kana mubhazi kuenda kubasa? Iwe unofarira kushanda wega kana neshamwari uye nemimhanzi yepashure munzvimbo yakanyarara? Kana iwe usingafarire kudzidza Chirungu, hausi kudzidza nemazvo! Iwe unogona kuzvipa iwe zvinokurudzira kuti urambe uri munzira yakanangana nechinangwa chako. Iwe unogona kugadzira mubairo sisitimu yega yega chidzidzo chawakaita.
Vamwe vadzidzi vanoda kuziva kuti hunyanzvi hupi hunonyanya kukosha. Saka vanoronga kutanga neyakakosha kutanga. Ivo vese vanoverenga, sezvo hunyanzvi hwese hwakavakirwa pane mumwe nemumwe. Nekudaro, isu tinoshandisa humwe hunyanzvi kazhinji kupfuura vamwe kutaura. Semuenzaniso, ingangoita 40% yenguva yatinoshandisa kutaurirana isu tiri kungoteerera. Isu tinotaura nezve 35% yenguva. Inenge 16% yekutaurirana inouya kubva pakuverenga uye nezve 9% kubva pakunyora. Paunenge uchidzidza Chirungu, rega imwe mhando yechidzidzo ifambe ichienda kune imwe. Semuenzaniso, verenga nyaya wobva wataura nezvayo neshamwari. Tarisa bhaisikopo wobva wanyora nezvazvo.
Zvinogona kuve zvakaoma kutanga chero chinhu kubva pakutanga, kunyanya kana iwe ukadzidza kunyora mumutauro wakasiyana zvachose neako. Zvakafanana nekufamba wega munzvimbo isingazivikanwe zvachose. Asi iwe unogona nyore kudzidza nemienzaniso uye kurovedza kunoiswa mune ino chinyorwa.
Chengeta kabhuku kekudzidza mazwi matsva. Pano, nyora mazwi awakadzidza muarufabheti. Saka iwe unogona kuona uye kubata nemusoro izwi roga roga zvirinani. Tsamba dzeChirungu Chidzidzo Chidzidzo Usasvetuke kudzidzira uye kugadzirisa mibvunzo yekuyedza mushure mechikamu chekudzidzisa chete. Chirungu chinodzidziswa zviri nyore uye nekukurumidza kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchiona kwazviri mazuva ese
Muenzaniso weChirungu Colors uye Chirungu mavara...
Mazita eChiRungu (Personal Pronouns) Munhu weChirungu...
Mhuri yedu yeChirungu, Nhengo dzeMhuri dzeChirungu, Mhuri yeChirungu…